Shirqoolkii dabinka umadeena Somaliyeed Koofur iyo Woqooyi oo soo afjarmaya - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Shirqoolkii dabinka umadeena Somaliyeed Koofur iyo Woqooyi oo soo afjarmaya
CADOWGII ,SHIRQOOLKII ,DABINKII UMADEENA SOMALIYEED WAQOOYI & KOONFUR BA WAA SOO AFJARANTAY YAASE KA DANBEEYEY??, WAA IMISA DAL TIRADOODU ??? DHIIGII, DHAGARTII TUKARAQNA WAA BADBAADAY
Sir culus oo bishaaro ah 1AAD
Dhamaan waxa si kadis ah islu bedeshay siyaasada caalamka dal & dibadba
Xukunkii dunida waa isbedelay maanta 9/6/2018 “NEW WORLD ORDER DEATH ” Bye bye.. GUUL SOMALI isbedelkaasina waa mid umadeena soomaaliyeed u dan ah.
Waxana lagu gaadhi doono Dhaqaale iyo Barwaaqo Somalina way is cafisay, waana ka ilabaxeen dagaal sokeeye , Ilaahayna wadamaasi waa inaga jeediyey iyaga ayaa isku baabi’i doona baaba’a dalalkaasina dhankeena waa inoo faa’iido hambalyo….
Tirada wadamada Shirqoolka ka danbeeyey 200 sano ilaa qarnigii 17aad dabayaaqadiisii ayaa lagu qiyaasaa ,lakiin wuxu soo ifbaxay uguna badnaa dagaalkaasi 80kii sano ee u danbeeyey ilaa 9/6/2018. waana maalintii ugu danbaysay
sabaha keenay inay fashilmaan waa sidan wadamadii shirqoolka .
wadamada Musdanbeedka u ahaa shirqoolka umadeena soomaaliyeed waa sidatan:- Nationalism of Islamism & terrorist.
Yuhuuda, Itoobiya, Maraykanka, Ingiriiska, Kanada oo amarkay qorsha ayey dejin jireen isbaahaysigaasi .
Kuwa loo isticmaalayey waa kuwa sheegta islaamka lakiin inoo soo raacay cadowgeena waana Toolkii Fashilmay Turkiga, Sucuudiga, Imaaraadka, iyo Qadar oo amarka ka sii qaadan jireen kuwan hoose bal meesha tamarta la geliyey bal u fiirso Askar yaryartaasi waa sida tan Masar, Ciraaq, Kuweyt.
OO baaba naqotay Yaman, Baxreyn, Cumaan, Liibiya, Kiiniya, Eritariya Halaka carabtu $680 million 1976 siiyeen Itoobiya iyo Dalka Iraan oo ahaa dalka ugu mudada yaraa 6 bilood oo kaliya shirqoolka ku jiray iyadoo ahayd 1976 $100 Million ku caawisay dowlada Itoobiya taasi oo lagu qasbay inay bixiyaan ama carabtu iskugu tagto nafbaa u gaysay bixintaas lakiin kuma jiro shirqoolka somalia . waxaad la socon doontaan wadankastaa sidii Ciyaarta uga hadhaayo . waxaan ku bilaabayaa turkey
Turki aan u horaysiino fashilka somaliya Awaaqiibka u kala kulmay.
Dowlada Turkiga ayaa 8 dii sano u danbeeyey ku mashquulsanaa baabinta somalida soona galay dalka 2011 , maahayn gurmad abaartaasi dhacday ee wuxuu ahaa wejigii lagu baabinaayey 200 ee sano ee soo socota nasiib wanaag dhexdhiisii ayaa khatar ku jira waa ku fashilmay dagaalka loo adeegsaday ee hubaynta koonfur qabiilada & ururada islamism hubayntooda .
Balse waa nasiib daro dhamaan kuwa sheegta jamacada carabta waana ku guul daraysteen Somalia waa wadankii Abid loogu isbaahaysiga badnaa ee dunida soo mara .
Somaliya waa wadabka ugu dhaqalaha khaydka macdan iyo khayraad , shidaal badan kaalinta 4aad ku jira caalamka.
Aduunkuna wuu u baahday
balse Turki waa ku wareeray waxayna gaadhay wakhti ay iskood u mashquulaan , oo dalkoodii qaar baabinaaya , Ordigan 2019 Waa laga tuurayaa xilka Reer galbeed uu aaminay awgeed oo waa fashilmeen dagaaladii loo adeegsanayey ee argagixsada ahaa .
Turkey wuxu ku noqon doonaa 1923 halkay soo marayeen siyasadaasi ay kana soo kaban waayaan . bye bye shirqoolkii Somalia ee dowlada turkiga .
Itoobiya Siday uga hadhay shirqoolka somaliya
EItoobiya somaliya waxay rabtay inay tirtirto, nasiib wanaag waxay somaliya noqotay diinkii shimbiruhu u heshiiyeen . Qarnigii 18aad ilaa 2018 horaantiisii markay Itoobiya Shawa la odhan jiray ayey bilaabeen inay Somaliya baabiyaan.
Waxayna rabeen Somaliya 16 milyan inay isku baabiyaan , maxaa kugu soo dhacayaa markaad dagaaljaasi ethipia eegto .
Waxay ahayd Bad ama xeeb inay gelaan , waa ku guuldaraysteen waxaana dhexdoodii ku furmay tushuush.
Waa sababta ay Eritariya ula heshiiyeen 26 sano colaadi ka dhaxaysay waxayna eletria ku xidhay inay ay casilaan Sarkaalo ku fashilmay New world order oo la jaanqaadi doona RT & Shiine oo reer yurubna u baratamayaan ilayn Awoodii caalamku waa isbedashay shuruud kale oo ah inay maraakiib dagaal kusoo kordhiyaan bada eletria, Sidaasi awgeed ethiopia ay bad ku heshay Somalilina kala nabad galeen Shirqoolkii Itoobiya bye… bye…
2dav wadan ee colka ahaa 70 Sano kabadan waa heshinayaan labada North korea , & South korea . waana isku biirayana 70 sano ka badan, intii danbana 26 sano ethipia & Elitria waa heshiyeen .
Somaliland & Somalia Maxaa dadkeena oo waalo ah Heshiiska u diiday Waana in Heshiiskaasi una qiiro ahaane Laga fiirsado Wayo arag aqoonyahan wax garad . Waa in laga wada tashado aayaha dalka Dhamaan caruur iyo ciroolaba
Su’aashu waa Somaliland & Somalia Inaan ku Heshiino khayraadka dalkana ku mashquulno soo saartiisa Maxaa lagu gaadhi karaa ????
jwbtuna waa dhankiina
bal soo ururiya dalooyin sidii lagu midoobi lahaa waana muhiim talafiinu mmahadsanid ….
Fikirka u adeega Umadiisa soomaaliyeed
Mukhtar Ali Aden